Faniriana Faniriana :
Ry Tompo Andriamanitra Tsitoha ô!miantso Anao @ alalan'i Jeso Kristy Tompo Mpamonjy Zanakao Lahy tokana ary mpihaino ny vavaka asandratray.
Omeko Anao Jeso zao fanirianay mivady izao dia ny mba hiarahanay miaraka makany Canada.
Ataovy mahita billet mora sy promotion izahay Jeso fa hainao atao ny mampisy izany a.
Misaotra indrindra Jeso malala.
Voninahitra sy ny dera ho Anao irery iany.
(nosoratan'i F.N tamin'i 24 desambra 2015)
Misaotra Anao aho Andriamanitra o noho ny fitantananao mahagaga, tsy takatry ny saina ny fandaharanao, ny hany azoko ambara dia oe mahagaga Andriamanitra, tompony fahefana rehetra @ fiainanay olombelona, Misaotra Ray o,fa @ anaran' Jesoa Kristy lay efa maty hoanay teo @ Hazofijaliana ny hanaovako izao vavaka izao,
(nosoratan'i Norob tamin'i 17 desambra 2015)
Dieu tout puissant mon Papa.Toi qui a gueri mon petit fils, merci de tout mon coeur et de tout mon âme.MERCI et gloire à Toi SEIGNEUR;AMEN
(nosoratan'i mama tamin'i 24 desambra 2015)
fanasitranana fanasitranana :
Ry Tompo Andriamanitra RAIKO !! DIEU TOUT PUISSANT MON PAPA.
Mon papa au nom de mon doux Jesus CHRIST.
Mon grand Frère,mon SAUVEUR,mon unique protecteur.
Jesosiko Mpanasitra ô entiko eo Aminao ny zafikeliko R.S.E voan'ny virus ono.
Raiso izy Jeso d sitrano fa Hianao no inoako sy fantatro fa mahay ny zavatra rehetra koa mahay manasitrana Hianao,mahay manala ny aretina Hianao,matoky Anao aho ary manantena valimbavaka dia ilay fanasitranana avy Aminao.
Misaotra indrindra Jesosy a!Raiso ny dera, ny haja, ny voninahitra, ny fankasitrahana,ny hoby,ny laza,ambony indrindra ho Anao!
(nosoratan'i mama tamin'i 18 desambra 2015)
Misaotra Anao aho Andriamanitra o noho ny fitantananao mahagaga, tsy takatry ny saina ny fandaharanao, ny hany azoko ambara dia oe mahagaga Andriamanitra, tompony fahefana rehetra @ fiainanay olombelona, misaotra Ray o,fa @ anaran' Jesoa Kristy lay efa maty hoanay teo @ Hazofijaliana ny hanaovako izao vavaka izao, Amen !
TOMPO O, MISAOTRA ANAO RAHA MBOLA AFAKA MIANTSO ANAO AMIN IZAO FOTOANA IZAO.
MANGATAKA NY FAMINDRAMPONAO AHO NY HIJERY ARY HANMPY AHY KA HANALA NY ARETIKO IZAY MITADY HANDAVO AHY.
IANAO IRERY IHANY NO LEHIBE INDRINDRA ARY INOAKO DIA INOAKO FA HANASITRABNA AHY IANAO KA HANAPOTIPOTIKA NY HERIN NY RATSY.
MAMELA AHY TOMPO O SATRIA MPANOTA TSY MENDRIKA AMINAO AHO NEFA MATOKY NY VONINAHITRAO.
AMNI NY ANARANAO IRERY IHANY NO HANAOVAKO IZANY VAVAKA IZANY.
(nosoratan'i Mme Harisoa tamin'i 8 desambra 2015)
Miankohoka eo anoloanao zahay mivady ry Tompo Andriamanitray.
Hidera sy hisaotra Anao @ Anaran'i Jeso Kristy Zokinay.
Misaotra indrindra Tompo Ô fa raha nametraka ny fikasanay hanokatra atelier de sérgraphie zahay mivady d tanteraka soamatsara izany ary ef naazo cde aza.
Marina tokoa fa ny Tananao mahery no momba sy nanohana izany ka tafajoro soamatsara.
Fanahy Masina ô,tario sy tantano io orinasa kely io ary hitaridalana sy hanome tolotsaina anay mandrakariva anie Hianao.
Ka ho voninahitrao izay rehetra atao ao.
(nosoratan'i F.N tamin'i 19 novambra 2015)
Ry TOMPO ANDRIAMANITRA, miantso Anao @ Anaran'i Jeso Kristy ZANAKAO Mpamonjy anay.
Miandrandra famindram-po sy famelana ary ny fanadiovana tanteraka @ Ranao soa ry Jeso ZOKINAY;
Mifona noho ny accident nitranga ka nahafaty an'i Tony.
Diso ary tena diso ny zanako ka mitalaho famindrampo avy Aminao.
Mangataka zahay Ray o,noho ny haben'ny fitiavanao dia raiso antanana ny fandaminana rehetra ary aoka izay sitraponao irery ihany no tanteraka ary raisiko ho marina aminay ilay teninao hoe:HIANAO NO HIADY HO ANAY FA IZAHAY ANGINA.
Mino aho ary manantena valim-bavaka avy Aminao @ ANARAN'i JESO KRISTY.. ILAY ANARANA MAHAGAGA;misaotra Tompo
(nosoratan'i RHC tamin'i 2 desambra 2015)
TOMPO O, hitanao izao zavatra mahazo ny olombelona izao izay tsy azonay hialana satria tsy maintsy hatrehin ny olona rehetra, ny hangatahinay AMINAO TOMPO O dia ny hanomezanao ny Finoana anay mba hiorina tsara ka hatoky Anao amin ny andronay rehetra.
(nosoratan'i Mme Sylvie tamin'i 20 novambra 2015)
Misaotranao Andriamanitra Ray ô ,
Rainay @alalan'iJesoa Kristy,fa nomenao anay ny namanay Naina nandritra ny fotoana maro.
Mino izahay fa nalainao ho eo Aminao izy @izao fotoana izao araka ny hebean'ny famindramponao sy ny fitiavanao.
Ampaherezo Tompo ny reniny izay nilaozany,ny fianakaviana izay nianteherany ary ny mpiara-miasa izay tsy nahafoy azy,ampatsiahivo @ tsirairay ny finoana ny mbola hihaonana indray andro any @fitsanganan'ny tena @ maty.
Malahelo ny fo fa Ianao Atra be fitiavana no analefaka ny alahelo rehetra.
Ampitomboy ny finoanay Anao ry Tompo tsara ô,
@ anaran'i Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy anay Amena
(nosoratan'i Champi tamin'i 19 novambra 2015)
Jesoa o, Ianao lay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay,
Mangataka Aminao zahay mba hijery manokana ny renim-pianakaviana zay misy fivontosana ao @ kibony.
Mahay ny zavatra rehetra Ianao koa dia aoka atoky Anao Jesoa reo zanany ary ampio izireo @ fikarakarana rehetra.
Misaotra Jesoa fa mamaly vavaka Ianao.
(nosoratan'i norob tamin'i 19 novambra 2015)
Ry Andriamanitra Ray o!Rainay @ Anaran'i Jeso Kristy Mpamonjy anay.
Misaotra indrindra noho ny herinandro vaovao omenao anay,
Misaotra noho ny famindram-ponao.Misaotra noho ny fahasalamana;
Misaotra noho ny fanjakanao mahery sy mandresy ato anatiko.
Deraina ny Anaranao Jeso.omena Anao ny Voninahitra sy ny fahefana izay ef Anao hatrizay ka ho mandrakiay.
(nosoratan'i RHC tamin'i 09 novambra 2015)
Mba mangataka vavaka ho an'i neny fa misy fivontosana ny kibony tokony ho didina.
Mangataka vavaka ho anay zanaka mba hahazahoanay mikarakara azy na amin'ny ara-bola na amin'ny fifandraisanay.
Misaotra indrindra dia mirary soa ho tahian'i Jesoa.
(nosoratan'i afiafy tamin'i 12 novambra 2015)
Tompo o! mangataka ny famindram-ponao izahay mivady noho ny tsy fahatokianay Anao indraindray @ fiainanay.
Mamela heloka A/tra o! dia mangataka ny fitahianao ny zazakely izay ato anatiko mba ho salama soamantsara anie izay misaotra Andriamanitra o!
(nosoratan'i ravaka tamin'i 12 novambra 2015)
TOMPO O, misaotra Anao amin ny fitiavana omenao anay isan andro.
Arotsahy aty anatinay ny Fanahy Masinao mba hitantana anay ahazoanay ny hery, tanjaka entinay manompo Anao amin ny andronay rehetra,
Amin ny Anaranao mahavonjy no hanaovako izany vavaka izany.
(nosoratan'i Mme Harisoa tamin'i 12 novambra 2015)
Misaotra Andriamanitra fa niseho ny voninahitrao namindra fo tokoa hianao ary mbola notahianao mihoatra lavitra noho izay noheritreretinay aza izahay narovanao zahay 3 mianaka indrindra misaotra Tompo
(nosoratan'i ravaka tamin'i 16 novambra 2015)
fiderana fiderana :
Midera sy manandratra Anao zay ry Andriamanitra Rainay, @ anaran'i Jesoa Kristy Tomponay,
Midera Anao zay noho ny asanao lehibe eo @ fiainanay isan'andro,
Midera Anao zay araka ny Teninao manao hoe zao olona noforoniko ho Ahy izao no hanambara fideràna Ahy, koa dia raiso Tompo o ny fiderÃ na asandratray ho Anao,
@ anaran'i Jesoa, amena !
(nosoratan'i Norob tamin'i 6 novambra 2015)
Ry Tompo Andriamanitra Ray o!
Rainay @ Anarany Jeso Kristy Zokinay sy Mpamonjy anay.
Mametraka ny programa rehetra anio eo ampelatananao aho.
Matoky anao aho ary mino fa hainao atao ny zavatra rehetra.misaotra noho ny fiahianao anay.
(nosoratan'i RHC tamin'i 04 novambra 2015)
AFAKA AFAKA :
Dia mbola naazo fahasoavana vao maraina avy Aminao indray aho ry Jehovah Shalom, Jehovah El Shadai, Jehovah Rapha fa nafahanao tanaty fiavonavonana ra sarotra tamiko izany.
Tena miaiky Anao ny amiko iray manontolo, mpanafaka tokoa Hianao, dia mbola manavao ny fanolora-tenako aho hiasanao sy hanjakanao ka Hianao Jehovah Andriamanitra tsitoha no ekeko fa LOHANY @ zavatra rehetra amiko sy @ ankohonako.
Dera,laza,haja sy voninahitra ho ANAO irery.
(nosoratan'i RHC tamin'i 27 oktobra 2015)
FAMINDRAMPO FAMINDRAMPO :
TOMPO O, mangataka famindram po Aminao izahay ny hatantananao ny fiainanay isanandro.
Manota eo Aminao izahay nefa nohon ny fitiavanao lehibe dia omenao ny fitiavanao ka nahatratra indray izao fotoana izao, izahay rehetra ataonay anie TOMPO dia aoka Ianao lehibe no handrotsaka ny fitiavanao aty aminay.
Dia amin ny anaranao no irery ihany no hangatahiko izany vavaka izany.
(nosoratan'i Mme Sylvie tamin'i 02 novambra 2015)
famindram po famindram po :
Mamindra fo amiko Andriamanitra o fa mpanota tsy mendrika aho
Mamela ny heloko
Efa nisasa aho nefa niverina nihosi potaka indray
Mamela ny heloko Tompo mahery o
Tena mifona Tompo a
(nosoratan'i hery tamin'i 29 oktobra 2015)
mba raiso mba raiso :
Dadako @ Anaran'i Jeso Kristy Archimandritat Zanaka.
Atolotro Anao zao maraina zao indray ny fiainako, sy ny amiko rehetra anjakanao ka izay sitrakao no aoka atao ary tanterao ny planinao fa manaiky Anao aho.
Dia toy izany koa ny ankohonako, raiso ny anjakanao ny aminy rehetra fa mino aho fa tinao izy ary tia Anao iany koa.
@ ANARAN'I JESO ZOKY NO ANANDRATAKO IZAO VAVAKA IZAO ;
(nosoratan'i christiane tamin'i 21 oktobra 2015)
Ry Andriamanitra Ray Tsitoha.@Anaran'i Jeso Kristy Zokiko no iantsoako anao ka anolorako ny fisaorana sy fankasitrahana tanteraka Anao ry telo nefa IRAY;noho ny fahasoavana sy ny famindram-ponao omenao isan'andro.
Misaotra noho ny fahasalamany S. misaotra noho ny zandriny ny S efa mitsaika.
Misaotra noho ny asa rehetra.misaotra noho izay rehetra tsy voatasina.
Misaotra indrindra Anao mandray zao vavaka izao.
Misaotra Dada malala.
Misaotra Zoky hajaina.misaotra Fanahy Masina.
(nosoratan'i christiane tamin'i 14 oktobra 2015)
Jeso Tompo o, Misaotra Anao aho fa mbola nomenao indray izao fotoana izao ahafahako mivavaka sy miantso ny Anaranao.
Ny hany tokana hangatahiko Aminao dia fahendrena mahay mankato Anao amin ny androko rehetra ary raha misy fankam panahy na herin ny satana mitady handavo ahy dia Ianao irery no afaka hanafaka ahy amin ny ady atrehiko.
Amin ny anaranao no anaovako izany vavaka izany.
(nosoratan'i Mme Sylvie tamin'i 14 oktobra 2015)
Andriamanitra o!Raiko @Anaran'i Jeso Kristy zokiko.
Manolotra ity anio ity sy ity herinandro vaovao ity ary ity volana 2 sy tapany farany @ ity 2015 ity , eo ampelatananao aho mba hanjakanao sy ho raisinao an-tananana tanteraka satria ny ao aminao irery no misy ny fahatanterahana tsara ary Hianao no tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra.
Misaotra RAY ZANAKA FANAHY MASINA;
(nosoratan'i RHC tamin'i 19 oktobra 2015)
Apetraka Apetraka :
Misaotra ry Tompo Rainay @ Anarany Jeso Kristy fa afaka mametraka ity herinandro vaovao ity eo apela-tananao aho.
Ary indrindra koa mba raiso ho eo ambany fiadidinao ny fianaran'i F.sy ny fikasany hanorina sy hanangana orinasa kely manao serigraphie.
Mino izahay fa ra Hianao no homba izany dia kely ny fiandoany fa ho lehibe ny fiafarany ao aoriana kely ao.
(nosoratan'i F.N. tamin'i 26 oktobra 2015)
Tompo o manahy mafy aho mety ho rendrika nefa eo Ianao dia matoky aho fa tsy anary ahy Ianao
(nosoratan'i njaka tamin'i 19 oktobra 2015)
ANDRIAMANITRA O, Misaotra Anao mandrakariva raha mbola nomenao fotoana fohy mbola ahafahako miantso ny Anaranao.
Na dia ratsy eo imasonao ary aho dia mbola mitodika mijery ahy ianao ary isaorako indrindra izany.
Mitoera ato anatin ny fiainako Tompo ary tsy misy afa tsy Ianao irery ihany no ilaiko hiaraka amiko.
(nosoratan'i Mme Harisoa tamin'i 12 oktobra 2015)
Tompo o inty aho olona mahantra be siasia manantona Anao ilay Mpamomjy mora azo indrindra ho entiko eto anatranao daholo ny fahotako rehtra ty misy afenoko ka mba miangavy sy mitalaho Aminao Ray o fafao re ny fahotako rehetra mamela ny heloka manendre ny lelako mba tsy hiteny zava-poana mifona tena mifona fa diso eee am-panetre tena tokoa no anantonako Anao satria inoako fa tsy hanary ahy mandrakizay ianao hoy ny teninao Tompo o vonjeo re eee amin'ny anarao no amtrahako ny vavako Amen Amen
(nosoratan'i noo tamin'i 2 oktobra 2015)
herinandro herinandro :
Misaotra ry Ray Tsitoha,Rainay @ alalani Jeso Kristy
Misaotra noho ny fiasana'ny Fanahinao Masina nitarika ahy hivavaka ka nahazoako tombany t@fiainako satria nandray ny FIADANANA FENO SY FANAMBINANA avy @Andriamanotra Ray aho,tsodrano marina amiko ary tanteraka amiko satria notolotry Jeso Kristy ahy ary noraisiko t@finoana.
Misaotra indrindra Jeso;
(nosoratan'i HCR tamin'i 28 septambra 2015)
TOMPO TSARA INDRINDRA O,
Misaotra sy manome voninahitra Anao mandrakariva aho amin ny fitiavana izay omenao anay mianakavy, misaotra indra JESO satria na dia tao aza ny tsy fahasalaman i Neny izay nandalo fandidiana dia efa mihatsara izany ankehitriny ary dia mbola hapetrakay am pelantananao mandrakariva ny fahasalamany.
Hainao ny zavatra rehetra JESO koa dia matoky izahay fa tsy avelanao irery ny olona.
Amin ny Anaranao JESO MPAMONJY no anaovako izany vavaka izany.
(nosoratan'i Mme Sylvie tamin'i 24 septambra 2015)
Misaotra ry Tompo Andriananahary.
Nahary izao rehetra izao ary nahary anay rehetra iany koa.
Mino aho fa mbola Hianao iany koa ary tsy misy hafa tsy Hianao no anome zaza ao an-kibony M.mba ho zafikeliko faha2.D manaiky ny fahefanao ary manome voninahitra ny anaranao Masina ny tenako.
@ANARAN'i JESO KRISTY Tompoko sy Mpamonjy. AMEN
(nosoratan'i mama tamin'i 24 septambra 2015)
Misaotra ry Ray Tsitoha Masina sy Marina ary indrindra be fitiavana sy famindrampo,Misaotra noho ny FAHASOAVANAO isan'andro.
Misaotra fa tonga soamatsara ny zanako sy ny zanany.
Misaotra fa vita soa iany koa ny fandevenana.
Misaotra fa na dia eo aza ny rofirofy mandalo dia fantatro fa ny tananao mahery no mbola momba ahy sy mitaridalana aho.
Misaotra @ Anaran'i JESO KRISTY ZOKY ZANAKAO.
Misaotra @ foko manotolo sy ny saiko aho, ary miankohoka eo anatrehan'ny Fahamasinanao Andriamanitra Ray Zanaka Fanahy Masina.
(nosoratan'i N tamin'i 18 septambra 2015)
Misaotra Tompo Tsitoha Andriamanitra Ray,mandray zao fivavako izao.
Misaotra noho ny nahatraran'ny zanako 27taona androany.
Misaotra Fahasoavana sy Famindram-po avy Aminao ry Jeso Zoky no nanaraka azy nandritra zay ary mbola hanaraka azy foana @ andro hiainany izay mbola omenao azy.
Misaotra Jeso a.@ANARAN'I RAY ZANAKA FANAHY MASINA.
(nosoratan'i NENY tamin'i 23 septambra 2015)
Misaotra Jeso mihaino ny fivavako.
Manantena valim-bavaka avy Aminao aho ary ampianaro ahay mihaino.
Mangataka fahendrena avy AMINAO aho itondrako ny fianako,ny demission,ny olona hisolo ahy,ny dde desejourn'i papa,ny fikarakarana ny fandehanana, ny asa momba ny zaitra sy ny vy,ny trano, ny zanako lahy tokana,ny taratasiny,ny asany ny fahasalamany...
Izay reetra tsy voatoniny vavako nefa fantatrao fa mahasoa dia raiso Jeso a.
Mila Anao aho Tompo.Avia, raiso ny tanako.amen
(nosoratan'i RHC tamin'i 22 septambra 2015)
Ry Tompo Andriamanitra Ray,Rainay @alalan'i Jeso Kristy,nitondra ny helokay,nanafaka anay,mifona hoanay @ teny tsy hay tononina eo anatrehanao ry Ray.
Koa raisiko fa tanteraka amiko sy ny ankohonako ny famonjena vitan'iJeso Kristy.
Koa afaka misaotra sy mangataka aho ka hinoako fa voaray eo ampelatananao ry RAY zao vavaka izao.
Misaotra fa mitsaika ao ankibony zanako vavy ny sombin'ny aiko,zay atolotro Anao sahady ho vimbinonao sy hombanao ka ny fahatanterahana rehetra avy Aminao ry Ray Zanaka Fabahy Masina no hialoha sahady ny fiainany.
Ho voninahitry ny Anaranao irery iany.ALLELOUIA - AMEN
(nosoratan'i MAMA tamin'i 22 septambra 2015)
Tompo, Rainay izay any an-danitra o! Misaotra anao izahay fa nahatratra izao fotoana izao ary mbola misaotra anao fa mbola afaka mifandray aminao amin'ny alalan'ity vavaka ity.
Mifona amin'ny heloka izay vitanay izahay; mahatoky ny famindram-ponao izahay.
Koa mangataka aminao ny mba hanomezanao anay ny hery sy tanjaka ary fahasalamana mba hoentinay amin'ny asa fanompoana anao eto amin'ny Fiangonana ary indrindra ivelan'ny Fiangonana.
Tompo o! omeo anay Loholona sy Diakonina ny saina mahay miray hina sy ny fo feno fitiavana anao mba hahafahanay manantanteraka ny adidy sy ny hosahaninay.
Tahio ary Tompo mba tsy ho very maina ny dinidinika izay nataonay anio sy ny famiofanana rehetra natao fa mba hanampy anay amin'ny fijoroana ho vavolombelonao.
Misaotra Tompo fa be fitiavana iana indrindra ianao. Anao ny voninahitra sy ny Dera ary ny Laza anio, rahampitso ary mandrakizay Amen
(nosoratan'i anonyme tamin'i 23 septambra 2015)
Tompo o!mangataka ny famindram-ponao izahay mba tahio ny asanay sy ny tokatranonay mba hirombirombo sy ho lavitrin'ny fakampanahy sy ny fakahalana @ anaran'IJeso kristy Tomponay no angatahanay izany
(nosoratan'i Ranoelison jose Nirina tamin'i 7 septambra 2015)
Andriamanitra o misaotra Aho tamin'izay rehetra nataonao taminay mianaka isan'andro.
Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao tahio zahay Ry Rainay be fitia o mba hahita ny fampitaovana rehetra ho an'ny zanako.
Mangataka ny famelankelokao aho raha misy tsy mety nataoko ka tsy araka ny sitraponao.
Anao Irery ihany ny voninahitra mandrakizay. Amena
(nosoratan'i FRJ tamin'i 24 aogositra 2015)
Misaotra anao zahay ry Ray.
Rainay @ alalan'i Jeso Kristy.
Asandratro avo ny Anaranao Masina.
Deraiko koa ho ren'zao tontolo izao ny Fahamasinanao.
Misaotra ry Tompo fa lehibe ny voninahitrao. Misaotra fa izay rehetra ananako dia avy Aminao.
Misaotra foana noho ny tombon'andro. Misaotra noho ny tolo-tsaina sy ny tolo-kevitra rehatra avy Aminao.
Misaotra noho ny fikarakaranao sahady ny dian' A SY M ary S SY D.
Misaotra foana foana Jeso a. Amen
(nosoratan'i R.H.C. tamin'i 24 aogositra 2015)
Anniv.mariag Anniv.mariag :
Misaotra Anao zahay ry Ray,Rainay @ alalan'i Jeso Kristy,misaotra fa nahatratra ny faha-30taona ny fanambadiana androany zay 2 noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe tsy takatry ny saina.
Mankasitraka Ray ô,noho ny Teninao ISAIA 41/10 fa momba anay Hianao,mamonjy anay ary mitantana anay @ tanana ankavanan'ny fahamarinanao Hianao.AMEN
Ny taona maro hoavy omenao anay ra mbola tsy tonga eny @rahon'ny lanitra JESO ZOKY dia mbola apetraka feno eo Aminao zahay2 sy reo zanaka amanjafy avy Aminao.
Misaotra indrindra RAY ZANAKA FANAHY MASINA. Allelouia
(nosoratan'i F sy N tamin'i 25 aogositra 2015)
(nosoratan'i noro tamin'i 30 aogositra 2015)
Androany 13 Août 2015,izaho N.dia manaiky ny ho ampiasain'ny Tompo Andriamanitra Tsitoha,Rain'i JESO KRISTY MPAMONJY.
Manaiky aho ho fitaovana eo ampelatananao ry Ray Zanaka Fanahy Masina,3nefa1.
Toroy lalana aho Jeso ary tehirizo @ fahamasinana sy ny fahadiovana noho ny Rànao raisiko isan' andro.
@ Anaranao Jeso no anaovako zao vavaka izao.
ALLELOUIA - AMEN
(nosoratan'i N tamin'i 13 aogositra 2015)
Andriamanitra o!misaotra Anao aho fa mbola nataonao velon'aina.
Misaotra Tompo fa notahianao ihany koa ireo mamiko rehetra ka mbola eo anilako mandrakariva.
Tahio ny fianakaviako mba hahita soa @ Anaranao.
Ambino Tompo o!ny fikasanay ny mba hitondranay ny fanambadianay hohamasinina ao an-tranonao masinao.
Ianao anie no hanampy @ enti-manana mba ho tanteraka araka ny voninahitrao tokoa izany.
Matoky ny fitantananao izahay ry Tompo o!ary tsy mitsahatra ny misaotra Anao.
(nosoratan'i Mihary tamin'i 19 aogositra 2015)
Ry Andriamanitra Ray.Raiko @ alalan'i Jeso Kristy.
Mifona aminao aho Tompo,fa nanota ary nanao izay ratsy teo aminao.
Mangataka ny Ran'i Jeso Kristy aho hanadio ahy.
Misaotra fa Andriamanitra Ray Zanaka Fanahy Masina mihaino vavaka Hianao ary mamaly vavaka.
Koa mangataka aho zafikely avy Aminao,zaza apetrakao ao ankibon'i R.M.N.,zaza salamana saina,vatana,fanahy.zaza ho feno ny Fanahinao dieny mbol any an-kibo.
@ Anaran'i Jeso Kristy no hanaovako izany vavaka izany.
Misaotra Tompo Tsitoha ô.Deraina ny Anaranao Masina ndrindra.AMEN!
(nosoratan'i R.H.C tamin'i 10 aogositra 2015)
Misaotra ry Tompo Andriamanitra Ray.Rainay @alalan' i Jeso Kristy.
Deraina sy omena voninahitra ny Anaranao masina indrindra.
Apetrako eo ampelatananao Tompo ô ny fikasana rehetra,ny vacances sy ny enti- manana @zany.
Misaotra noho ny famindram-ponao sy ny fahasoavanao Ray Tsitoha.
@Anaran'i Jeso Zokinay sy Mpamonjy anay.
(nosoratan'i maman'i S.R.E. tamin'i 13 aogositra 2015)
Lehibe tsy takatriny saina tokoa raha ny fitiavaNAO, ny hantraNAO
Ka dia mbola nomeNAO izao masoandro sy volana vaovao izao indray izahay!
Hifonanay amiNAO izay rehetra vitanay tsy arakany faniriaNAO Jesoa a!
Fenoy tany lonaka ny fonay haniriny fahatsaraNAO sy ny fitiavaNAO entinay hanasoa ny mpiray monina aminay! Eny Tompo ô,
Noho izany dia hapetrako tanteraka eo ampelan-tanaNAO izay momba ahy rehetra!
Misaotra Andriamanitra ô
Aminy anarany Jesoa Kristy, Mpamonjy anay
(nosoratan'i NhR tamin'i 1 aogositra 2015)
Misaotra Tompo ô!
Tsy tahak'izao izahay raha tsy teo anilanay IANAO!
Misaotra Tompo mpamela heloka a! Narovanao foana izahay na dia teo aza ny toetra tsy mendrika ANAO!
Tsy miloaka akory ny vavako dia efa fantatrao ny fifaliako, ny ahiahiko, eny ny momba ahy rehetra Jesoa a!
Ka dia mbola hapetrako tanteraka ao aminao ny momba ahy rehetra!
Ho tanteraka araka ny sitraponao anie ny hetahetako sy izay hahasoa ahy!
Ho ANAO irery ihany ny voninahitra
(nosoratan'i anonyme tamin'i 22 jolay 2015)
Mila ANAO Mila ANAO :
Jeso Kristy Zokiko a!manavao ny fanoloran-tenako eto aho ho Anao sy hanjakanao ny fiainako @ lafiny rehetra:ny ankohonako,ny volako,ny asako,ny fasalamako,ny tokatranoko...
Misaotra fa vita @ty daolo ny trosa retra.
Zoky a,omeo tolo-kevitra sy toro-lalana tsara avy Aminao aho itondrako ny fiainany.
Deraina Hianao,ary ny Voninahitra dia hoAnao irery iany;RY TSARA SY MPANOME NY TSARA ANKALAZAINA NY ANARANAO MASINA DIA JESO IZANY;
(nosoratan'i RHC tamin'i 14 jolay 2015)
FAHASOAVANA SY FAMINDRAM-PO
NO HANARAKA AHY IHANY KOA
AVY AMIN'ILAY TOMPO TSITOHA
AMIN'NY ANARAN'I KRISTY JESO.
HOTANTERAKA TOKOA ANIE IZANY @ ireo izay rehetra mamaky ity tonombavaka ity ka mino izany.
Tsara atao tsinjery ary tononina @ finoana sy fanantenana isa-maraina.
(nosoratan'i rhc tamin'i 23 jona 2015)
Miasaotra Anao za Tompo Andriamanitro noho ireo valimbavaka narotsakao taminay mianakavy.
Misaotra fa salama tsara R.S.E.ary mitombo saina sy fahaizana ary mbola atolotro hanjakanao ny fiainany ka ho miaramilanao izy sy ny zandriny.misaotra Jesosy malala ô.
Ry Andriamanitra Rainay.Rainay @ Anaran'i Jeso Kristy Zokinay.
Misaotra noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao.
Mangataka ny Fanahinao Masina aho, hitaridalana sy hanolo-kevitra ahy @zay tokony ataoko sy fanampahakevitra tokony raisiko ary koa izay tokony teny aloaky ny vavako.
Mba izay rehetra atao dia ho voninahitrao irery ihany.
@Anaranao JESO no hanaovako zao vavaka izao.
(nosoratan'i christiane tamin'i 27 jolay 2015)
Tano aho Tano aho :
Misaotra Tompo ô.misaotra @ zavatra rehetra.
Mamindra fo aminay ary mamelà ny helokay.diovy zay mba ho afa-pahotana fa mila Anao mafy izahay.
Mangataka ny Fanahinao Masina izahay itari-dalana sy hanolotsaina mandrakariva.Deraina ny Anaranao masina.alleluia.amen
(nosoratan'i RHC tamin'i 27 mey 2015)
Misaotra Anao ry Tompoko sady Andriamanitro, Raiko @ alalan'i Jeso Kristy Mpamonjiko.
Izy no nitondra ny aretiko,ny gadrako, ary olona afaka aho ankehitriny satria mino sy mandray AZY.
Misaotra Tompo Masina indrindra o.
Misaotra Anao ry Raiko,fa mitsinjo ahy sy ny ankohonako ianao araka ny haben'ny Famindram-ponao.
Tena afaka izahay ary manana fanantenana velona ao anatinay fa ho tafita ary ho sambatra sy hanana ny fiadanam-po avy AMINAO RAY ZANAKA FANAHY MASINA;AMEN
(nosoratan'i Christiane tamin'i 23 jona 2015)
Jesoa Tompo ô!
Mamelà ny helokay,aza havela ho azon'ny fakampanahy izahay. Ankehitriny koa Tompo ô! managataka aminao izahay aza havela hisarabazana ny fianakavianay ary ny fiainanay manontolo Tompo de hapetrakay eo ampelatananao.
Misaotra Tompo ô! Amen
(nosoratan'i heriniaina tamin'i 12 jona 2015)
Mitaraina Mitaraina :
Tompo ô, tsy mendrika aho na dia ny hiantso ny Anaranao aza,vonoy ny fahotako, ary mamindrà fo amiko,hamasino aho fa te hahita ny tavanao, dia ny angatahiko aminao, Tompo ô, mba hafao amin ity trosan'ny banky ity aho fa tena reraka,
Omeo fitiavana aho hitiavako Anao Ray, sy ny tokatranoko,ny vady aman-janako,ary ny olona rehetra,amin'ny anaran'i Jesoa no hanandratako izany vavaka izany Amen.
(nosoratan'i Noelisoa tamin'i 4 jona 2015)
Misaotra Tompo ô noho ny famindramponao lehibe sy ny fitiavanao anay fa tena mihevitra sy mikarakara anay Ianao ka nomenao izao tranokala afahanay mandray fampaherezana sy mifampivavaka izao.
Faniriako indrindra Tompo ô de ny hitahianao manokana izao tranokala izao ary ny mba hananako toe-po, toe-panahy, toe-tsaina mendrika sy tsara ho voninahitry ny anaranao Amen
(nosoratan'i Lydah tamin'i 23 mey 2015)
jaona 15 jaona 15 :
mba arao ambavaka ny fianako sy ny fianampitiavana
(nosoratan'i Razanamilay Miorah Tiana Stella tamin'i 16 mey 2015)
RyAndriamanitra Ray,rainay @ Anaran'i JesoKristy,
manantona Anao aho hitsaoka sy hiankohoka eo an-tongotra Jeso.
Satria masina sy marina Hianao ary mendrika ny dera sy ny haja ary ny voninahitra.
Handohalika eo an-tongotrao izao rehetra izao ary koa ny amiko rehetra ka hanjakao.
Inty aho Jeso manao zao vavaka izao:mangataka hery sy tanjaka ary fahasalamana ho an'i R.S.E ka ahay hipetraka sy ahay andady @zay izy;hivavaka iany koa hoan'i Malala mba omenao fahasalamana iany koa; ary ho an'i Prisca sy ny vadiny mba hiverina @ laoniny ny tokatranony ka ifamela heloka.
Mivavaka iany koa aho hoan'i Hery sy ny hoaviny na @ asa na @ fiainana na @ fahasalamana.
Tompo ô tsy ireo iany fa Hianao mahalala izay mahasoa ny fiainako sy ny ankohonako.misaotra Jeso Kristy Zokiko ô.AMEN
(nosoratan'i R.H.C tamin'i 5 mey 2015)
Ry Andriamanitra Ray Tsitoha,Rainay @alalan'iJESO KRISTY Tompo.
Misaotra Anao fa tena feno sy henika ny fahasoavanao sy ny famindramponao ny fiainako.
Misaotra noho ny asan'ny Fanahinao Masina eo @asako sy ny fiainako ka nadraisako valimbavaka ary nisehoany voninahitra.
Hitako ny lalatsara ka izorako ary azoko ny famonjena ka ho tanako.misaotra Tompo @Anaran'i JESO KRISTY.AMEN
(nosoratan'i christiane tamin'i 13 mey 2015)
Salamo 133 Salamo 133 :
Tianao Jesosy mato nameny tombonandro hianana de manaova ny tsara mandrakariva
(nosoratan'i RAKOTONDRABE Radonirina tamin'i 16 mey 2015)
Misaotra Anao Ray Masina Tsitoha fa manana izao fitaovana izao afahana mandefa vavaka Aminao.
Mangataka mba raisinao an-tanana zao faniriako izao dia ny hanokatra varotra DEPOT DE MEDICAMENT.
Ny taratasy rehetra momba izany dia apetraka Aminao hatraminy fisokafan'ny trano fivarotana.
Misaotra Jeso fa mihaino sy mamamaly vavaka Hianao.Mino sy manantena Anao ay mivady.AMEN
Ry Tompo Andriamanitra Ray ô.RAINAY @alalan'i Jeso KRISTY.
Misaotra Anao aho noho ny fitarihinao ny fiainako sy ny fiainan'ny ankohonako.
Jeso zoky malala ô.miditra eo @ fiainanay ary raiso ny fitondrana ny fiainanay mianakavy kely,ny tenako ,ny vadiko ,ny zanako, ny vinantoko , ny zafikeliko ary ny zaza ao an-kibon'i M.Mtoky Anao zahay ary misaotra Anao indrindra.
@ Anaranao Jeso Kristy no anaovakao zao vavaka izao.AMEN
(nosoratan'i Christiane tamin'i 20 aprily 2015)
Jesosy oh misaotra anao amin'ny asa nomenao ahy.
Omeo hery sy fahalalana ahavitana izany asa izany araka ny indrafo nao.
Aoka ho vavolombelona mandrakariva ny mpanomponao misaotra Jesosy Amen
(nosoratan'i N tamin'i 16 aprily 2015)
Misaotra Jeso fa mbola tafiditra eto za ka miara miombom-bavaka @ireo namako eto.
Miandrandra valimbavaka avy Aminao izahay.Matoky manana Anao, matokyfa izay mino ka manakina marina ny fiainany AMINAO dia ho voavonjy ary hotafianao ny Fahasoa-vanao sy ny Famindramponao.
Matoky koa aho Jeso fa hamaly ireo vavakay ireo Hianao satria ao Aminao ny Fahefana rehetra ary rehefa Hianao no miasa dia tsy hisy ahasakana.
Andriamanitra tsy handrin' ny hafa dia handriko iany.AMEN
(nosoratan'i RHC tamin'i 30 aprily 2015)
manoln tena ho anao aho ry Jesosy Tompo.
(nosoratan'i Rado tamin'i 20 aprily 2015)
Tompo ô , isaoranay Ianao amin'izao tombon'andro izay nomenao anay izao,mamindra fo aminay ary mamelà ny helokay satria mpanota isan'andro isan'andro izahay.
Indro Tompo apetrakay eo am-pelatananao izao ady atrehinay izao, mino anefa izahay fa hivaoka mpandresy noho ny Aminao irery ihany.
Misaotra Ray ô ,
(nosoratan'i nad razafy tamin'i 16 febroary 2015)
Tompo ô , mbola misaotra Anao hatrany aho noho ireo zava-tsoa izay arotsaka amiko sy izay rehetra mikasika ahy, Tompo ô fantatrao fa mpanota izahay nefa mbola arovanao sy omenao ny fitahiana manana amby ampy , koa indro aho Tompo manavao ny fanoloran-tena ho Anao indray, anjakao aho Tompo ary iasao feno araka izay sitraponao .
Dia amin'ny alalanao Jesosy Kristy Tompo no anaovako izao vavaka izao, misaotra indrindra Ray ô AMEN.
(nosoratan'i nad razafy tamin'i 18 febroary 2015)
MITALAO MITALAO :
Tompo o misaotra anao aho fa mbola nomenao tombon'andro indray hahafahako manao izay sitrakao, mitalaho aminao aho tompo mba ataovy tanteraka amiko araka ny sitrakao ny faniriko sy ny hetahetako izay mahabe ahiahy ahy amin'izao fotoana izao
Tompo o mino aho fa hainao atao ny zavatra rehetra, misaotra Tompo o amen.
(nosoratan'i MMI tamin'i 18 febroary 2015)
fitomboana fitomboana :
Ry Andriamanitra Ray Tsitoha,Rainay @ alalan'i JESO KRISTY TOMPO.
Miantso ny Anaranao mahefa ny zavatra rehetra aho,mangataka hery sy tanjaka ho any S; mangataka fitomboana tsara ho azy avt Aminao aho ry Raiko be fitia sy mpamaly vavaka,fitomboana ara-batana sy ara-tsaina ary ara-panahy avy AMINAO @Anaran'i Jeso KRISTY mpamonjy sy mpisolovava anay @vavaka tsy hay tononina.
Tompo ô! mivavaka manokana ho an'i R.S. Enrick aho mba ho tafionao fahasalamana izy ary omenao hery sy tanjaka ka hialehibe ara-dalana.
JESO malala ô valio re ra sitrakao zao faniriaka izao.
Matoky Anao aho fa eo ampelatananao ny hoavin'io zafikeliko io.
(nosoratan'i mamie tamin'i 13 febroary 2015)
Tompo ô ,apetrako feno eo ampelatananao ny asako , fantatrao Tompo ny zava-mitranga ato amin'ny toeram-piasana , nefa Tompo Ianao mahalala ny mahasoa sy ny mahatsara anay koa tanteraho aminay Tompo ny sitraponao sy ny fandaminanao , de izay rehetra ataonao mba hlaminanay Tompo de ekenay avokoa satria mino izahay fa tsy hanary anay Ianao,anjakao tanteraka Tompo ny fiainanay fa efa natolotray ho anao.
Miantso Anao @ Anaran'i Jeso Kristy aho ry Andriamanitra Raiko.
Mila Anao, ny fantrehanao,ny fombanao aho, ary mila tolo-kevitra avy Aminao amin'ny fanapahakevitra tokony ho raisiko ka mametraka indrindra ny hoaviko eo ampelatanana aho na ara-bola fa indrindra koa ny ara-panahy.
Jeso Tompo aoka Hianao no hanendry ny vavako,aoka izay fantatrao fa mahasoa no tanteraka eo @ fiainako sy ny ankohonako.
Matoky Anao aho JESOSY a!Misaotra Tompo malala ô!
(nosoratan'i christiane tamin'i 3 febroary 2015)
MARO BE NY OLANA ATREHIKO, MATY NY VADIKO, NY ZANAKO MADITRA BE MIHINTSY,
MARO BE NY TROSAN'OLONA AMIKO IZAY MBOLA EFAIKO, MITADY VADY HENDRY AHO, NA EFA NISARAMPANAMBADIANA NA MATY VADY MBA HO NAMAKO HAMPAHERY AHY MANOLOANA NY FIAINANA VADY HENDRY MATAHOTRA AN'ANDRIAMANITRA SY OLONA MIASA TSARA TSY MISOTRO TOAKA NA MIFOKA SIGARA NA MILOKA FA OLON'ANDRIAMANITRA
EFA MIOMANA HO MPIANDRY AHO IZAO EFA TAONA FAHAROA KA METY HO TOKANANA AMIN'ITY TAONA ITY RAHA SITRAPON'NY TOMPO.
(nosoratan'i Anonyme tamin'i 10 febroary 2015)
Feno 6 mois androany Tompo ô ny zafikeliko, ka inty aho manolotra fisaorana feno Anao ny @zany ry RAY ZANAKA FANAHY MASINA, fa feno ny fahasoavanao sy ny fitahianao izy sy ireo ray amandreniny.
Havaoziko ndray anio ny fametrahako ny hoavin'io zaza io eo ampelatananao,ny fahasalamany,ny fahendreny,ny fitomboan'ny sainy sy ny fahaizany zavatra maro.
Havaoziko iany indrindra koa ny fanolorako io zaza io ho Anao ka ho feno ny Fanahinao Masina mandrakariva izy ary ho fitaovana eo ampelatananao hanehoana ny voninahitrao na dia mbola zazakely aza.
Ampanetre-tena Jeso Mpihaino sy Mpamaly vavaka no hanaovako zao vavaka izao.
(nosoratan'i RHC tamin'i 3 febroary 2015)
fisoarana fisoarana :
Misaotra Anao aho ry Andriamanitra Ray Zanaka Fanahy Masina.
Misaotra @ Anaran'i Jeso Kristy Zoky fa Hianao Jeso no efa misolovava anay ary mifona ho anay.
Ra tsy teo Hianao Jeso dia asa izay nanjo anay.
Misaotra Jeso fa nomenao zanaka hendry sy afaka manampy anay izahay na ara-kevitra na arabola.
Misaotra noho ny famindram-ponao,misaotra noho ny namalanao ny helokay,misaotra noho ny fanavotanao anay.
Matoky Anao aho @ ny hoavinay rehetra
(nosoratan'i rhc tamin'i 11 febroary 2015)
TOMPO O, misaotra sy manome voninahitra Anao izahay satria mbola nomenao tombonandro ka afaka midera sy mankalaza ary manome voninahitra Anao.
Misaotra Anao izahay tamin izay rehetra nataonao ary ny mbola ataonao aminay tsirairay avy.
Mangataka aho TOMPO ny hijerevanao ny fiainan ny tsirairay avy na iza na iza JESO KRISTY dia mangataka amin ny Anaranao ny hitandremanao ny fiainany olona izay mino sy matoky Anao.
Ianao Ilay JESO KRISTY anie hanendry ny fiainan ny tsirairay amin izay rehetra atao.
Amin ny Anaranao ILAY LOHAN NY MPIANDRY NO HANAOVAKO IZANY VAVAKA IZANY.
(nosoratan'i Mme Sylvie tamin'i 4 febroary 2015)
Manantona Anao ampanetretena aho JESO, miankohoka tanteraka aminao ny amiko rehetra.
Misaotra Anao fa fahasoavana sy famindrampo no efa narotsakao tamiko sy t@ ankohonako nandritra ny androm-piainako.
Misaotra Jeso fa na dia tsy mendrika aza dia nampahitanao ny fahatsaranao izahay teo @ fiainanay.
Miasa daolo ny zanako, salama tsara izahay,nomenao zafikely aho,manana fiara,mipetraka @ trano tsara,afaka mivavaka ankalalahana,omenao sakafo isan'andro,ampitoerinao aminay ny fifankatiavana,ary fahasoavana maro tsy votanisa JESO a!!
Misaotra fa mbola afaka miditra eto miombo-po @ vavaka.
MISAOTRA JESO TOMPO malala ô
(nosoratan'i Christiane tamin'i 21 janoary 2015)
Mivavaka aminao aho Ry Andriamanitra RAY @ Anaran' Ilay Zanakao Lahy Tokana di JESO KRISTY Mpamonjy sy Mpanavotra ary Mpihaino sy Mpamaly vavaka.
Mangataka Aminao aho Zoky a, mba tahionao Sandry zafikeliko,omeo fahasalamana sy ataovy matanjaka izy Jesosy a! ataovy mitombo tsara ny sainy,ny vatany ary indrindra fenoy ny Fanahinao Masina izy.
Dieny zao fahazazany zao ry Jeso Tompo dia tezao sy ampianaro ho tia Anao ary ho miaramilanao anie izy @ fahatanorany.
Misaotra RAY ô@ ANARAN'NY RAN'i JESO KRISTY TOMPO.AMEN
fametrahana fametrahana :
Tompo Andriamanitro o!
@ Anaran'i Jeso Kristy Mpamonjy ahy no angatahiko ny ahatanteraka izay sitraponao RAY ZANAKA FANAHY MASINA momba ny asako na hanoy na tsia aho.
Mamindrà fo amiko Jeso Tompo @ ty foko be fanahiana.
Ampitomboy ny fahatokiako Anao.
Fenoy ny Fanahinao Masina aho hitaridalana sy hanoro aho zay tokony ataoko sy lazaiko.
(nosoratan'i Christiane tamin'i 30 janoary 2015)
Andriamanitra ô!!misaotra anao raha mbl velon'aina soaman-tsara @ zao fotoana izao.
Ianao no tokiko sy heriko na d mpanota tsy mendrika aza aho!Mifona ,mivalo ,mibebaka @nao aho t@ izay ratsy vitako hatramin'izay.
Enao mahalala ny zavatra rehetra nataoko ,tena menatra Anao aho nefa na dia izany ary Ianao iany no fantatro fa tsy hamela ahy irery.
Mifona aho Ray ô!!tena tiako Ianao,mangtaka famindram-po @nao aho.
(nosoratan'i Narie tamin'i 2 febroary 2015)
FIDERANA Fisaorana :
Midera sy manandratra avo ny Anaranao Masina indrindra aho ry Tompoko sy Andriamanitro,
@ Anaran'i Jeso Kristy Zanak'Andriamanitra, Andriamanitra velona mandrakizay.
Masina sy marina, mendrika sy be voninahitra!;Tsara sy mpanome ny tsara Hianao Jeso Mpamonjy ahy sy ny ankohonako.
Miankohoka eo an-tongotrao aho JESO ho fanehoako fa manaiky ny fahefanao aho,manaiky sy mino fa Hianao irery no Andriamanitra Tsitoha.
Asandratro ny tanana ho Anao Jeso Mpanjakako.AMEN
(nosoratan'i RANDRIA tamin'i 3 febroary 2015)
Ry Jeso zoky be fitia o misaotra Anao izahay nohon'ny fitiavanao sy ny hamoram-ponao tehirizo ho madiao izahay ary tohano mandrakariva fa maro ny fhavalo na ny toetra ratsy ananay aza dia efa fahavalo mamotika anay koa mangatak izahay mba ho diovina sy ho fafanao ny toetra ratsy rehtr mba hahafany miambina tsara mba tsy ho azony fakampanhy ka tsy ho zakany arovy izahay Tompo fa mialoka Aminao misaotra Jeso oo Amen
(nosoratan'i Anonyme tamin'i 9 desambra 2014)
foko kely foko kely:
Maniry ahy ho entina am-bavaka eto ilay foko kely feno ratra foana
(nosoratan'i mandresy tamin'i 20 janoary 2015)
JESOSY O, misaotra Anao mbola nanome anay andro vaovao ahafahanay midera sy mankalaza Anao mandrakariva eo amin ny fiainanay.
Mifona ary mivaolo Aminao amin ny ratsy rehetra ataonay eo imasonao.
Mifona indrindra TOMPO O ary mandohalika eo imasonao izahay.
Amin ny anaranao irery ihany no anaovako izany vavaka izany. Amena
(nosoratan'i Mme Soa tamin'i 12 desambra 2014)
Tompo malala misaotra anoa indrindra aho fa tena nanehoanao ny voninahitrao fa tsy navelanao hoviraviraina fahavalo na dia ny singambolonay akory aza misaotra Jeso fa notantaninao izahay mianaka kely tsy navelanao irery misaotra misaotra misaotra Jeso o dia mbola mametrak isanndro ny fiananay Aminao izahay amen
FFANGATAHANA FFANGATAHANA :
DERAIKO SY OMEKO VONINAHITRA NY ANARANAO RY ANDRIAMANITRA TSARA INDRINDRA
Mangataka aminao aho ry Tompo fa vola be no hananako any amin'ny olona efa an-taonany maro izao koa omeo azy ireo ny fanomezam-pahasoavana mba ahefany mamerina izany amin'ny fotoana farany izay haingana satria tena ao amin'ny fotoana tena ilako izany izao.
Ny fanahy masinao anie hitoetra na amin'izy ireo na amiko.
Amin'ny anaranao Kristy no hanaovako izany vavaka izany.Amen
(nosoratan'i Vololona tamin'i 14 janoary 2015)
Hataka Hataka :
ANDRIAMANITRA O, mangetaheta Anao mandrakariva ny fanahiko ary mila Anao ny nofoko reraka sy trotrakin ny adin tsaina.
Mamela ny heloko JESO satria na dia efa nantsoinao ary ny tenako hanao ny asanao dia mila ketraka ihany indraindray ka mangataka ilay fitiavanao sy famindram ponao hirotsaka aminay.
Aoka izahay tsy ho voarebireby ny satana amin ny zavatra rehetra ary mangataka Anao aho ny hanapotehinao izany amin ny Anaranao irery ihany.
Izay rehetra tsy nambolenao JESO KRISTY dia ho roahiko amin ny Anaranao irery ihany.
(nosoratan'i Mme Sylvie tamin'i 26 novambra 2014)
Vonjeo aho Vonjeo aho:
Vonjeo aho Jesosy o! Jrreo ity aretinkoditra mahazo ahy ity
Aza arianao aho ,mamela ny heloko Tompo o!
(nosoratan'i Hanitra tamin'i 8 desambra 2014)
famelankeloka famelankeloka :
TOMPO O, mamela ny heloko fa mpanota tsy mendrika ny hiantso ny Anaranao akory aho nefa hoy IANAO HOE : IZAY MANANTONA AHY DIA TSY MBA HO LAVIKO MIHINTSY.
Misaotra indrindra JESO. Amena
(nosoratan'i Mme Soa tamin'i 6 desambra 2014)
Miandrandra anao izahay TOMPO O ny mba hihainonao ny vavakay.
Mitalaho ary mifona amin ny ratsy rehetra vita eo imasonao.
Aoka ny Fanahy Masinao hitoetra aty anatinay ka hialoha lalana anay mandrakariva.
Misaotra indrindra JESO KRISTY. Amena
(nosoratan'i Mme Soa tamin'i 9 desambra 2014)
Vonjeo aho Vonjeo aho :
Vonjeo aho Jesosy o! Jereo ity aretinkoditra mahazo ahy ity